कहाँ जाने मईमा: विश्वभरि १० उत्तम गन्तव्यहरू यात्रा समाचार
कहाँ जाने मईमा: १० उत्तम गन्तव्यहरू
लुइस मार्टिनो | 18/05/2021 10:25 | पर्यटन गन्तव्यहरू, मार्गदर्शकहरू
हामी तपाइँलाई यस लेखमा कहाँ मे मा यात्रा गर्ने को लागी बताउन चाहान्छौं: शीर्ष दस गन्तव्यहरू। कारण एकदम सरल छ: वसन्तले राम्रो मौसम ल्याउँछ, दिनहरू लामो हुन्छ र तापक्रम बढ्न थाल्छ। मानौं यी सबै पर्याप्त छैनन्, वर्षा yetतु अझै एशियामा बसी सकेको छैन र जाडोले दक्षिण अमेरिकामा अझै देखा पर्न सकेको छैन।
यो सबै बनाउँछ मे मा यात्रा एक महान विचार हो। थप रूपमा, होटलहरू सामान्यतया ग्रीष्म inतु भन्दा सस्ता हुन्छन् र धेरै ठाउँहरूले उत्सव मनाउँछन् parties निकै रोमान्चक। यदि तपाइँ यी सबै थप्नुहुन्छ कि पर्यटन क्षेत्रहरू जुलाई वा अगस्ट भन्दा कम भीडले छन् भने, तपाइँसँग मेमा कता यात्रा गर्ने भनेर सोच्न धेरै कारणहरू छन्। हामी तपाईंलाई यसको दश भन्दा राम्रो गन्तव्यहरू देखाउँदै छौं।
1 कहाँ जाने मेमा: १० उत्तम गन्तव्यहरू, दक्षिणी स्पेनबाट फिलिपिन्सको समुद्री तटसम्म
1.1 प्राग, एक संगीत गन्तव्य मे मा यात्रा गर्न
1.2 पोर्टो: कहाँ यात्रा गर्न मेमा यदि तपाईं केहि फरक खोज्दै हुनुहुन्छ
1.3 नर्मेन्डी, शानदार चट्टानहरूको भूमि
1.4 सेभिल, एक धेरै निकट लक्जरी
1.5 न्यू योर्क सधैं एक राम्रो शर्त हो
1.6 साइप्रस, भूमध्यसागर मा एक रत्न
1.7 ला पाल्मा, क्यानरी टापुहरूको बिभिन्न यात्रा
1.8 Bantayan, एक फिलिपिन्स टापु को शान्ति
1.9 कोर्डोबा, क्यालिफाल शहरको आकर्षण
1.10 कोस्टा रिका, प्राकृतिक पार्कहरूको भूमि
कहाँ जाने मेमा: १० उत्तम गन्तव्यहरू, दक्षिणी स्पेनबाट फिलिपिन्सको समुद्री तटसम्म
ती स्थानहरू जुन हामी तपाईलाई प्रस्ताव गर्न गइरहेका छौं यसले सपना जस्तो परिदृश्य, अतुलनीय समुद्र तट, असंख्य स्मारकहरू र परम्परागत उत्सवहरू समावेश गर्दछ जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध छ। हामी गन्तव्यहरूको हाम्रो यात्रा सुरु गर्दैछौं जुन मेमा यात्रा गर्न।
प्राग, एक संगीत गन्तव्य मे मा यात्रा गर्न
प्राग क्यासल र क्याथेड्रल
चेक क्षेत्र को राजधानी बोहेमिया यो पहिलो साइट हो जुन हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं। मानौं यसको विशाल स्मारक सम्पदा थोरै कारणको रूपमा छ, मध्य मेदेखि जुन जुनको शुरुमा यसको यो मनाउँदछ अन्तर्राष्ट्रिय वसन्त संगीत महोत्सव। ठूला अर्केस्ट्रा र कन्डक्टरहरू शहरमा अविस्मरणीय कन्सर्टहरू प्रदर्शन गर्न भेला हुन्छन्।
तसर्थ, यदि तपाईं संगीत प्रेमी हुनुहुन्छ भने, हामी यो घटनाको आनन्द लिन प्रागको यात्रा सुझाव दिन्छौं। र, जे होस्, भ्रमण गर्न नछाड्नुहोस् क्यासल र माला स्ट्राना जिल्लाहरू, जहाँ तपाईं स्मारक स्मारकहरू जस्तै प्राग महल नै देख्नुहुनेछ, को सेन्ट भिटस क्याथेड्रल वा बहुमूल्य चार्ल्स पुल। साथै, हिंड्न नबिर्सनुहोस् स्टार é मेस्तो, मध्ययुगीन शहर जहाँ तपाईं फेला पार्नुहुनेछ पुरानो शहर हल यसको प्रसिद्ध खगोलशास्त्रीय घडीको साथ।
पोर्टो: कहाँ यात्रा गर्न मेमा यदि तपाईं केहि फरक खोज्दै हुनुहुन्छ
पोर्टो, मे मा यात्रा गर्न एक उत्तम गन्तव्य
सम्भवतः पोर्तुगालको सबैभन्दा सुन्दर शहर हो लिस्बो र देश मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट मा छन् एल्गारभ। यद्यपि पोर्टोसँग पनि तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न धेरै छ। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, यसको पुरानो शहर घोषणा गरिएको छ विश्व सम्पदा यसका क्याथेड्रल, स्टक एक्सचेन्जको दरबार, चर्च र क्लेरिगसको धरहरा वा डुईरो नदीमा भएका धेरै पुलहरू जस्ता निर्माणहरूको लागि।
तर, थप रूपमा, तपाईं जीवन्त टेरेसहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ The Ribeira, जहाँ तिनीहरूले तपाईंलाई लोकप्रिय क्रीम केक र कम प्रसिद्ध पोर्ट वाइन प्रस्ताव गर्नेछ। जे होस्, यदि तपाईं पछि बनाउने प्रक्रिया जान्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंसँग डुईरोको छेउमा असंख्य वाइनरीहरू छन्।
अन्त्यमा, भ्रमण गर्न रोक्नुहोस् पोर्तुगाली शहर को संग्रहालयहरु। हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं मध्ययुगीनजुन तेह्रौं शताब्दीमा कासा डेल इन्फन्टेमा छ; एउटा इलेक्ट्रिक कारयसका पुराना सवारी साधनहरू, र Soares do रिस नेशनल, जसले मूर्तिकारको कामको ठूलो अंश देखाउँदछ जसले यसलाई यसको नाम दिन्छ, पोर्तुगाली इतिहासको सबैभन्दा प्रख्यात।
नर्मेन्डी, शानदार चट्टानहरूको भूमि
Etretat को चट्टानहरु
यसको उत्तरमा अवस्थित फ्रान्स, नोर्मान्डी यस समयमा सुन्दर छ। यदि तपाईं यसको भ्रमण गर्नुभयो भने, तपाईं जस्ता मनमोहक चट्टानहरू फेला पार्नुहुनेछ Étretat, तर जंगली समुद्री किनार जुन यसलाई उपेक्षा गर्दछ अंग्रेजी च्यानल र अन्य अद्भुत परिदृश्य।
तपाईं ऐतिहासिक शहरहरू जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ Ruan, जहाँ यो जलाइएको थियो आर्कको जोन र त्यसमा स्मारकहरू छन् जस्तै हाम्रो महिलाको क्याथेड्रल, गोथिक शैलीको गहना; सेन्ट-ओवेन र सेन्ट-म्याक्लुको चर्चको प्रभावशाली अबे, भव्य गोथिकको दुई उदाहरणहरू, र होटल डे बोर्गरथ्रोडेको सुन्दर भवन, पुनर्जागरण शैलीमा परिवर्तन भएको छ।
अर्को भ्रमण जुन तपाईं नर्मन्डीमा मिस गर्न सक्नुहुन्न लेह्याभरे, जसको ऐतिहासिक केन्द्र हो विश्व सम्पदा यसको अद्भुत पुनर्जागरण क्याथेड्रलको लागि, सेन्ट-जोसेफ चर्चको लालटेन टावर र अन्य स्मारकहरू।
तर सबै भन्दा माथि, तपाईं नर्मान्डी भ्रमण नगरी छोड्न सक्नुहुन्न मोन्ट सेन्ट-मिशेल टापु, जसले ज्वार बाहिर जान्छ र अन्तर्बिन्दु अवस्था छोड्छ र उही नामको प्रभावशाली बेनेडिक्टिन अबे स्थित छ, जसले क्यारोलिian्गियन, रोमेनेस्क र गोथिक शैलीहरूलाई मिलाउँछ।
सेभिल, एक धेरै निकट लक्जरी
Sevil मा प्लाजा डे España
तपाईले स्पेन पनि छोड्नु हुन्न जहाँ मेमा यात्रा गर्ने छनौट गर्न। Andalusian राजधानी वसन्त रमाउन को लागी एक शानदार गन्तव्य हो। सेभिलमा तपाईंसँग यसको अद्भुत स्मारकहरू छन् क्याथेड्रल यसको कुनै कम प्रभावको साथ जिराल्डा; को सुनको टावर वा वास्तविक अल्काजार, गहना जुन गोथिक र मुडेजर शैलीहरू संयोजन गर्दछ।
अधिक आधुनिक, तर कुनै कम कम दर्शक हो स्पेन स्क्वायर, १ 1929 २ of को Ibero-अमेरिकी प्रदर्शनीको लागि निर्मित र जसले यसको आकार र आकारलाई प्रभावित गर्दछ। साथै, यस को रूप मा यसको सुन्दर पड़ोस मा हिंड्न नबिर्सनुहोस् Triana वा त्यो सान्ता क्रुज र बहुमूल्य लागि मारिया लुइसा पार्क.
तर यसका अतिरिक्त सेभिलेसँग यस समयमा अर्को आकर्षण छ। मे को शुरुवात मा आफ्नो प्रसिद्ध उचित, परम्परागत प्रकाशको साथ र जहाँ तपाईं रक्सी र भूमिको संगीतको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
न्यू योर्क सधैं एक राम्रो शर्त हो
हामी देशहरू र महादेशहरू परिवर्तन गर्दछौं तपाईंलाई न्यूयोर्क भ्रमण गर्न आमन्त्रित गर्न, एक यात्रा शर्त जुन कहिले विफल हुँदैन। कुनै पनि समय "गगनचुम्बी भवनको शहर" मा जानको लागि राम्रो समय हो। यसमा, तपाइँ तपाइँको यात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ टाइम्स स्क्वायर, ठूला पर्दाहरूको प्रसिद्ध वर्ग। त्यसोभए तपाईं उनीहरूको छिमेकीहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, मुख्य रूपमा ब्रूकलिन o हार्मलेम, र हिंड्नुहोस् केन्द्रीय पार्क वा मा एक शो हेर्नुहोस् ब्रडवे.
तर तपाइँ के गर्न रोक्न सक्नुहुन्न यो हेर्नुहोस् स्वतन्त्रताको मूर्ति, ला इलिस टापुजहाँ संसारभरिका नागरिकहरू अमेरिकी सपनाको खोजीमा आएका थिए र जुन बसाईएको स्मारक हो, र जस्तै संग्रहालयहरू। महानगरीय कला, यो ग्रहमा आफ्नो प्रकारको सब भन्दा ठूलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो।
साइप्रस, भूमध्यसागर मा एक रत्न
अघिल्लो भन्दा फरक चरित्रको गन्तव्य छ जुन हामी अब तपाईंलाई सिफारिस गर्छौं। साइप्रस एक अतुलनीय ऐतिहासिक सम्पदाको साथ शानदार समुद्र तट र परिदृश्यको उत्तम संयोजन हो। पहिलोको सम्बन्धमा, हामी सिफारिस गर्छौं निसि y मकरोनिसोस, जहाँ तपाईं पनि डाइभि practice अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
विरासतको लागि, साइप्रसमा तपाईंले शानदार अर्थोडक्स मठहरू भेट्टाउनुहुनेछ त्यस्तै सेन्ट इराक्लेडिओस र मध्ययुगीन किल्लाहरू कि जस्तो कोलोसी, स्यान जुआनको अर्डरको नाइटहरू द्वारा निर्मित, पछि iglesias ती जस्तै Troodos मासिफ, को रूपमा मान्यता प्राप्त विश्व सम्पदा.
अर्कोतर्फ, देशको राजधानीमा, निकोसियातपाईंसँग एउटा शानदार स .्ग्रहालय छ जहाँ तपाईं नियोलिथिकबाट ओटोम्यान समयमा टापुको सम्पूर्ण इतिहास खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईले यो देख्नु भन्दा पहिले मध्यकालीन पर्खाल भेनेसियालीहरू द्वारा निर्मित, जुन पुरानो शहरको वरिपरि छ जुन ढोकाबाट पहुँच गरिन्छ Famagusta.
ला पाल्मा, क्यानरी टापुहरूको बिभिन्न यात्रा
Roque de लॉस Muchachos, ला पाल्मा मा
मेमा कहाँ यात्रा गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन हामी तल अर्को टापु सुझाव दिन्छौं। हामी तपाईंलाई क्यानरी टापुहरूमा सबैभन्दा कम परिचित ला पाल्माको बारेमा बताउन जाँदैछौं, तर शानदार परिदृश्यहरू, सपना समुद्र तटहरू र विशिष्ट शहरहरूले भरिएका छन्।
को रूपमा परिचित "सुन्दर टापु", यदि तपाईं यसलाई भ्रमण गर्नुभयो, तपाईं बलौटे क्षेत्रहरू जस्ताको मजा लिन सक्नुहुन्छ नाओसको पोर्ट, हरियो पोखर o लस क्यानकाजोस। तर रमाईलो लौरेल जंगल र त्यस्तै जग्गा ज्वालामुखीहरू मसँग एक गाईड थियो वा Caldera de Taburiente, जसको वरिपरि सम्पूर्ण राष्ट्रिय पार्क सिर्जना गरिएको छ।
अन्तमा, भित्र सान्ता क्रुज डे ला पाल्माटापुको राजधानी, तपाईंसँग स्मारकहरू छन् जस्तै सान फ्रान्सिस्को र सान्तो डोमिन्गोको चर्चहरू, जस्तै शक्तिहरू सान्ता क्याटालिना महल र उहाँलाई मनमोहक हवेली Sotomayor दरबार वा सालाजारको मुख्य घर.
Bantayan, एक फिलिपिन्स टापु को शान्ति
चिनी बिच, बान्तानमा
एसिया जहिले पनि राम्रो बिदाको लागि रोचक विकल्प हुन्छ, यस महाद्वीपमा सब भन्दा धेरै भ्रमण गरिएको देशहरू तिनीहरू अविश्वसनीय स्थानहरूका लागि घर हुन्, तर यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि मेमा तपाईंको यात्रा गन्तव्य समुद्र तट हुनुपर्दछ भने, फिलिपिन्स टापु बन्टायनमा भाग्ने विचार गर्नुहोस्। यसको सपना समुद्र तट बीच, हामी सिफारिस गर्दछौं कि कोटायसको बालुवाको जिब्रोको साथ। चिनीको; त्यो प्रमोदवनमा वा अझ बढी असहाय जुन तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्छ कुमारी टापु, जुन तपाईं साना स्थानीय डु boats्गा मध्ये एक भाडामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, भनिन्छ बka्क.
तपाईसँग बान्तानमा वास्तवमै अरु धेरै कुरा छैन। माथि उल्लिखित बालुवा क्षेत्रहरू बाहेक, तपाईं हिंड्न सक्नुहुन्छ ओमागीका ओबो-ओब म Mang्ग्रोभ इकोपार्क, प्रभावशाली म mang्ग्रोभ्सको एक प्राकृतिक ठाउँ। जे भए पनि, गन्तव्यहरू भित्र मेमा यात्रा गर्नको लागि, यो ती मध्ये एक हो राम्रो समुद्री किनार र अधिक शान्ति.
कोर्डोबा, क्यालिफाल शहरको आकर्षण
यो सधैं एक राम्रो समय कोर्डोबा को Andalusian शहर को भ्रमण गर्न को लागी एक राम्रो समय हो। व्यर्थमा होइन, यो सर्वाधिक घोषित स्मारकहरू मध्ये एक हो विश्व सम्पदा विश्व भरि। लगभग अनावश्यक यो हो कि हामी तपाईंलाई यसको भव्यको बारेमा बताउँछौं Mसानोहाल, हाम्रो महिलाको धारणाको क्याथेड्रल; यसको रोमी सम्पदाको; यसको पुरानो यहूदी क्वार्टरको जहाँ तपाईं अझै पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ सेपाराडको घर र सभाघरमा; को क्यालिफाल स्नान वा प्रभावशाली क्रिश्चियन मोनार्क्सको अल्काजार.
त्यस्तै, शहर बाहिर तपाईं को परिसर छ मदीना अज़हारास्पेनको मुस्लिम वास्तुकलाको ग्रेनाडाको अलहम्ब्राको छेउमा रहेको एउटा शिखर। तर यो त्यो बाहेक, मे को कोर्डोबा मा महिना को उत्सव यसको मनाउँछ पाटिओसको पार्टीघोषणा गरियो मानवता को अमूर्त विरासत, र पनि फेस्टिवल क्रस गर्नुहोस्.
कोस्टा रिका, प्राकृतिक पार्कहरूको भूमि
इराजा ज्वालामुखी, कोस्टा रिकामा
हामीले पूर्ण रूपमा गन्तव्य प्रकार परिवर्तन गर्‍यौं जुन मेमा यात्रा गर्ने हाम्रो सूची समाप्त गर्नका लागि। कोस्टा रिका यसको समृद्ध प्रकृति को लागी अलग छ। यसको राम्रो प्रमाण तपाईको मा छ राष्ट्रिय पार्क नेटवर्क, केही पहाडी र अन्य तटीय मैदानको बीचमा।
पहिलेको सम्बन्धमा, हामी तपाईंलाई हेर्न सल्लाह दिन्छौं Arenal ज्वालामुखी देखि एक o इराजाबाट एक, जबकि, सेकेन्ड को रूप मा, ती हुन् Cahuitaयसको कोरल चट्टानहरू र यसको आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगलको साथ; बर्रा होन्डाबाट एक, यसको गुफाहरू संग, वा Carara'sयसको मूल रूखहरू सहित।
पछिल्लो एक सय किलोमिटर पछि छ सन जोस, देश को राजधानी। यसमा तपाईले परिष्कृत नियोक्लासिकल भवनहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मूरको महल, पोष्ट र टेलिग्राफ वा त्यो राष्ट्रीय थिएटर, साथै महानगर क्याथेड्रल र चर्चहरु दया, को एकाकीपन र कार्मेन। यदि तपाईं कोस्टा रिकामा अन्य स्थानहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई प्रोत्साहन दिन्छौं यो लेख पढ्नुहोस्.
अन्तमा, यदि तपाईं सोचिरहनु भएको थियो भने कहाँ यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ मेमा, हामीले तपाईंलाई दशवटा गन्तव्यहरू देखाएका छौं जुन त्यतिखेर तिनीहरूको अधिकतम शोभामा छन्। अब छनौट तपाईंमा निर्भर छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » पर्यटन गन्तव्यहरू » कहाँ जाने मईमा: १० उत्तम गन्तव्यहरू
भेराक्रुजको विशिष्ट खाना